Global Voices teny Malagasy » Lalam-pahafahana sarotra nodiavin’ny Syriana iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Marsa 2019 5:54 GMT 1	 · Mpanoratra Alreem Kamal Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Tiorkia, Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny 14 septambra 2018)
Nahazoana alalana . Firas any Avaratr'i Syria taorian'ny fifindrana.
Tamin'ny alina mafanan'ny volana jolay, tanora siriana iray no nitsoaka tao anaty haizina, nanantena ny handositra ny nantsoiny fahiny hoe tanindrazana. Namakivaky ny lohasaha sy ny saha, ny tampon-tendrombohitra, ny rindrina izy sady nitrotro ny zandriny lahy. Avy amin'ny fanadihadiana momba ny horohoron'ny ady amin'ny diabe manerana ny saha maizimaizina, kanefa heno mikiaka avy any alavitra ny feon'ny Hyena, ity ny tantaran'i Firas Al Abdullah.
Avy any Douna i Firas, tanàna Syriana ao amin'ny faritra Ghouta, avaratra atsinanan'ny renivohitra. Niaina ny habibina mahatsiravina indrindra ny faritra nandritra ny ady, izay naharitra fito taona.
Nitifitra ary nanao fahirano an'i Ghouta atsinanana ny fitondran'i Assad, notohanan'ny Iran sy Hezbollah taorian'ny fanafihana indroa izay nanongotra ny tafiky ny fitondrana tamin'ny taona 2013.
Anisan'ireo tanàna natao fahirano ny toerana nahaterahan'i Firas, Douma. Namaritra ny fahirano ho “barbariana sy medievaly” Ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana momba ny fanadihadiana  ao Siria. Heloka an'ady maro sy heloka bevava maro manoloana ny maha-olona no nitranga nandritra ny fahirano naharitra dimy taona, manomboka amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana voarara ka hatramin'ny fampielezana ny mosary ho toy ny fomba fiady.
Ny fanafihana simika tamin'ny 21 Aogositra 2013 no trangan-javatra nahafaty ny sivily be indrindra tao amin'ny faritra. Io fanafihana io  koa no fampiasana fiadiana simika faran'izay ratsy indrindra nandritra ny 25 taona.
Nanamafy ny tatitra  iray avy amin'ny Firenena Mikambana fa natao tamin'ny fampiasana balafomanga kely feno singa “sarin” hatramin'ny 60 litatra ny fanafihana. Araka ny sasiteny fanombanana  nataon'ny governemantan'i Etazonia, naningotra ain'olona maherin'ny 1400 izany ka anisan'izany ny ankizy 426 fara fahakeliny.
Na dia tsy nanome tsiny ny fanafihana aza ny tatitra nataon'ny Firenena Mikambana dia loharanom-baovao maro samihafa no nilaza fa notanterahan'ny governemanta siriana izany. Nanazava i Peter Bouckaert , manam-pahaizana momba ny fitaovam-piadiana ao amin'ny Human Rights Watch fa fantatra ho ao anatin'ny fitaovam-piadian'ny tafika siriana ny balafomanga kely nofantarina tao amin'ny tatitry ny Firenena Mikambana.
Nihamafy ny fanafihana tsy mitsahatra an'i Ghouta Atsinanana tany am-piandohan'ny taona 2018. Namaritra ny toe-draharaha ho toy ny “voina mahatsiravina sy mahafaty vahoaka be” ny famoahana navoakan'ny “Médecins Sans Frontières (MSF)
Namoaka angona avy amin'ny tranokalam-pifaneraserana izay nangonin'ny fikambanana nandritra ny roa herinandro voalohan'ny fanafihana miaramila ny tatitra. Nasehon'izany fa nanomboka ny 18 Febroary ka hatramin'ny 3 martsa, olona 71 eo ho eo no maty isan'andro.
Tamin'ny faran'ny volana Martsa, nijanona ho toerana farany misy ny mpioko i Douma
Ny volana manaraka, nisy barika nitondra sarin nalatsaka tao an-tanàna ary namono olona 70 farafahakeliny. Nitatitra ny mpitsabo  tany an-toerana fa nifanaraka tamin'ny fatran'ireo fanafody mampidi-doza ny soritr'aretin'ireo notsaboina
Notondroin”ireo mpikatroka ao an-toerana, mpiaro ny zo maha olona ary firenena maromaro ho ny fitondrana Syriana no nanao ny fanafihana. Nanambara i Rosia  mpiara-miombon'antoka amin'ny fitondrana fa tsy nisy fanafihana nitranga ary nomanina sy notarihan'ny sampam-pitsikilovana Britanika ny porofo araka ny lahatsary.
Nandritra ny dimy taona nisian'ilay fahirano, nanavatsava ireo lalana efa rava i Firas sy ny namany ary nanao tatitra an-dahatsary momba ny vono olona maro, izay nalefany tao amin'ny kaonty tambajotra sosialiny.
Taorian'ny fanafihana miaramila maherivaika, dia noterena hifindra monina any avaratr'i Syria ho ao anatin'ny fifanarahana fanavotan'aina tamin'ny 1 Aprily i Firas sy ny fianakaviany. Nitatitra ny zavatra rehetra niainany tamim-pahatsorana i Firas nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices.
“Sarotra dia sarotra ny fiainana tany avaratra, nandre ny vaovao vono olona sy fakàna an-keriny hatrany izahay, indrindra fa ireo mpikatroka, ka sarotra be tamiko any.” Noho izany dia nanapa-kevitra hifindra any Torkia ny fianakaviany,manazava izy hoe “Te ho velona izahay, saingy mazava ho azy fa tsy midika izany hoe te hanadino” .Tsy misy afaka manadino revolisiona… raha manao izany dia toy ny hoe manadino ireo vahoaka manontolo efa lasa maritiora, ny vahoaka rehetra mbola voatazona, ny rehetra.”
Nanao fifanarahana tamina mpampita iray ho any Torkia i Firas sy ny fianakaviany. Nanomboka ny dia mampididoza ry zareo ny alin'ny 21 Jolay raha niampita ny ala Deir Sawwan. Tsy nampalemy ny fanapahan-kevitr'izy ireo ny kiakiaky ny hyena. Nipetraka teo ambanin'ny hazo oliva izy ireo niandry ny baikon'ny mpampita izay milaza fa malalaka ny morontsiraka.
Ny alin'iny, nankany amin'ny rindrin-tsisintany izy ireo ary tonga teo amin'ny tendrombohitra iray. Nandeha teo amin'ny rindrina izay tsy misy afatsy 15 santimetatra ny sakany i Firas sy ny fianakaviany. Tsy nisy toerana hametrahana tongotra havia akory. Arakaraka ny nandehanan'izy ireo ilay toerana ety dia ety, no mampiakatra kokoa azy ireo. Nijery nidina i Firas, ary mahita ny tenany eo ambonin'ny lohasaha 30 metatra ny halaliny.
Mitovy taona amin'ny ady i Muhammed rahalahin'i Firas faralahy. Tsy maintsy niteny azy izytalohan'ny niaingany hoe “ho faly ianao aoTorkia. Ho afaka hiala ao an-trano ianao ary hilalao amin'ny arabe mahafinaritra sy madio.” Raha mbola nandeha an-tongotra nandritra ny iray kilaometatra izy ireo dia nigorisa tampoka ny tongotra havia an'i Muhammed ary raha saika nianjera iny izy dia nosamborin'i Firas ny lantotanany.
Ao anatin'ireo entana milanja 20 kg tao anaty kitapo fibaby no itondran'i Firas ny fanalahidin'ny tranon'izy ireo efa tena simban'ny daroka an'habakabaka.
Tany am-piandohan'ny marainan'ny andro dia tonga tamin'ny faran'ny rindrina, izay tsy vita ny fanorenana azy ry Al Abdullahs. Tamin'ny fandinganana ny sisin'izany dia efa nanao dingana voalohany teo amin'ny tany tiorka ry zareo.
Nitohy nandritra ny adiny telo tany an-tendrombohitra sy ny lohasaha mamatovato ny dian'izy ireo. Nisy fotoana, voatery nibata an'i Muhammed i Firas rehefa nitsambikina renirano. Reraka ihany koa ny reniny ka ampifandimbiasiny ny mibaby azy sy ny rahalahiny. “Làlana tena nandreraka izany, ary tena maizina ny zava-drehetra, tsy ampy ny hazavan'ny volana hoy izy”
Rehefa avy nandehandeha 5 kilaometatra niala ny rindrin-tsisintany izy ireo, dia tonga tany Kilis, tanàna tiorka. Nisy fiarakaretsaka iray noraisin'ny mpampita nitondra azy ireo tany amin'ny trano iray hialana sasatra. Fotoana fohy taorian'izay, dia nisy taxi iray hafa tonga naka azy ireo mba handeha fiara mandritra ny 16 ora ho any Istanbul izay toerana niandrasan'ny havany azy ireo. Tonga tao Istanbul izy ireo tamin'ny folo sy sasany halina tamin'ny 22 Jolay.
Rehefa nangatahana haneho ny heviny mikasika ny fahatongavany tany Istanbul izy dia nanazava hoe: “Nahatsiaro ho tohina aho nandritra ny herinandro ary tsy nino fa nandao an'i Siria, ary amin'izao fotoana izao aho aty amin'ny toerana ahafahana miaina an-kahalalahana”. Tonga tany amin'ny “tontolo tena izy” aho – izany no iantsoako azy – ilay tontolo tena iainan'ny olona rehetra, saingy nahilikika noho ny fampahoriana mahery vaika natao taminay teo ambany fitondran'ny Siriana . [Ny fitondrana] izay nahatonga anay hiaina amin'ny karazam-piainana mihemotra sy baribariana ao anatin'ity ‘tontolo tena izy lehibe’ ity. “
Naneho ny hafaliany izy teo am-pijerena ireo jiro an-dàlambe voalohany tao anatin'ny fito taona” Sambany izahay nandritra ny taona maromaro nahita làlana izay tsy simban'ny balafomanga, sisin-dalana tsy misavovon'ny fako ary ny rindrina tsy voakitiky ny ady,” hoy izy.
Nanaraka azy tany amin'ny tranony vaovao ny horohoron’ i Firas fony izy nipetraka tany Syria.
Amin'ny fotoana handalovan'ny fiaramanidina na angidimby eo amboninay izahay manafina ny lohanay any ambany soroka satria matahotra izahay. Indraindray aho mampatsiahy ny sasany hoe misy fiaramanidina eo amboninay. “Nanazava i Firas.” Toa adala izany, “hoy izy nibitsika,” saingy mila fotoana ny hanadinoanay ny horohoro niainanay. “
Nofintininy hoe “mazava ho azy, fa tsara kokoa eto, indrindra ho an'ny fianakaviako. Ny fianakaviako no zava-dehibe amiko.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/29/126243/
 Nahazoana alalana: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913576995476832&set=pb.100004736201665.-2207520000.1536497689.&type=3&theater
 Ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana momba ny fanadihadiana: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23226&LangID=E
 Io fanafihana io: https://www.theguardian.com/world/2013/sep/16/syrian-chemical-attack-sarin-says-un